Mogadishu Journal » 2018 » June » 12
Mjournal :-Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa kulan ujeedkiisa ahaa iskaashi dhinaca Tirakoobka la qaatay Agaasimaha Guud ee Hay’addaha Tirakoobka (Statistics) Dalka Sweden oo soo gaaray...
Mjournal :-Askari ka tirsan ciidamada ammaanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa xasilinta ayaa caawa fiidkii nin watay Mooto Bajaajle waxa uu ku dilay halka loo yaqaano isgoyska IVECO ee wadada Warshadaha. Dadka deegaanka ayaa waxa ay inoo sheegeen dilkan inuu yimid kadib...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay Safiirka cusub ee Dalka Belgiumka u fadhin doona Soomaliya Nicolas Nihon. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa war bixin kooban ka siiyay...
Mjournal :-Wafdi uu hoggaaminayo Taliyaha howl-galinta ciidanka xoogga dalka General Maxamed Sheekh Madoowe ayaa booqasho ku tagay degaanka Baar Sanguuni oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhawaan ay kala wareegeen Al-Shabaab. Taliyaha ayaa tagay sidoo kale degaano dhowr ah...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kulan looga hadlaayay Ammaanka degaanka Tukaraq ee gobolka Sool, waxaa uu la qaatay wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya. Micheal Keating ayaa waxaa uu ku sugan yahay dalka Jabuuti,...
Ku dhawaad 10 ruux oo ku dhintay wabiga Shabeele ee g.Sh/Hoose
Mjournal :-Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in ku dhawaad 10 ruux xalay ay ku geeriyoodeen wabiga Shabeele ee gobolka Shabeelaha Hoose. Kuwaas oo gooni ay saarnaayeen kula qalibantay iyaga oo isaga kala gooshaya qaar ka mid ah deegaanada gobolkaasi. Inta...
Qeybo ka mid ah wadada wadnaha oo saaka xiran
Mjournal :-Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa saaka xiray qayb ka mid ah wadada Maka Al-Mukarama iyo guud ahaan wadada Wadnaha ee muhiimka u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka. Ciidan fara badan oo dowladda ka tirsan, ayaa lagu arkayaa wadooyinkaasi, kuwaasi oo...
Beesha Caalamka oo ku bixinaysa 40 Malyan oo Dollar dib u dhiska ciidamada Booliska Soomaaliyeed
Mjournal :-Wasiirka Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuuker Ducaale Islow ayaa Heshiis dib loogu dhisayo Ciidanka Booliska Soomaaliya Heer Federalka iyo Heer Dowlad Goboleed la saxiixday Peter De Clercq oo ah ku-xigeenka Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada...